ग्राहक झुक्काएको आरोपमा एप्पललाई एक करोड डलर जरिवाना ! :: Setopati
ग्राहक झुक्काएको आरोपमा एप्पललाई एक करोड डलर जरिवाना !
एजेन्सी क्यालिफोर्निया (अमेरिका), मंसिर १६
ग्राहकलाई झुक्काएर आइफोन बेचेको आरोपमा इटालीको एक सार्वजनिक संस्थाले एप्पललाई एक करोड डलर बढी जरिवाना तोकेको छ।
टेक अखबार द भर्जका अनुसार इटालीको एक गैर सरकारी सार्वजनिक संस्था 'एजिसिएम' ले एप्पलले आइफोन पानी प्रतिरोध रहेको भनी विज्ञापन गरेको तर ग्राहकले त्यो सुविधा नपाएको आरोप लगाउँदै एक करोड बीस लाख डलर जरिवाना लगाएको हो।
एप्पलले आफ्ना आइफोन पानी प्रतिरोध भएको दाबी गरेको तर यसबारे स्पष्ट नबताएको आरोप एजिसिएमको छ।
एप्पलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको आइफोन ८ र आइफोन ८ प्लस मोडल चार मिटर गहिरो पानीमा तीस मिनेटसम्म डुबाउँदा पनि केही नहुने बताएको थियो। तर, एजिसिएमले भने एप्पलको यो दाबी शुद्ध पानी भएको विशेष प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणमा मात्र लागू हुने भनेको छ।
यसकारण कयौं ग्राहकलाई एप्पलले गलत सूचना दिएर ठगेको आरोप छ। कुनै आइफोन पानीका कारण क्षति भए त्यो आइफोनको वारेन्टीभित्र समावेश नहुने भनेकाले पनि एप्पलको आलोचना भएको द भर्जले लेखेको छ।
दुइ वर्षअघि पनि एजिएसमले एप्पल र सामसङलाई उपकरणमा नयाँ सफ्टवेयर हालेर बिगारेको आरोपमा जरिवाना लगाएको थियो। त्यस्तै ग्राहकलाई पुराना फोनको ब्याट्री र पफर्मेन्सबारे अगाडि नै जानकारी नदिई परिवर्तन गरेको भन्दै एप्पललाई एक करोड डलर जरिवाना लगाएको थियो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १६, २०७७, १४:२६:००
६३ लाख भन्दा धेरै नेपालीको हातमा फोर जी
मध्यम मूल्यमा फ्ल्यागसिप फिचर भएको रियलमीका फोन
विद्‍युतीय फोहोरको जोखिम बढ्दै, सरकारसँग छैन व्यवस्थापनको योजना
यस्तो छ सामसङको नयाँ ग्यालेक्सी बड– प्रो